“သန်းရာချီရမယ့် ဘောက်ဆင်ကြိုးဝိုင်းမှာပဲ ရင်ဆိုင်ပါ Khabib” လို့ဆိုတဲ့ Mayweather
17 Nov 2018 . 9:02 PM
UFC ရဲ့ လိုက်ဝိတ်ချန်ပီယံ Khabib Nurmagomedov ဟာ ဝိတ်တန်း (၅) ခုရဲ့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Floyd Mayweather ကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့သတင်းကို အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ “ခင်ဗျားကလည်း ပွဲ (၅ဝ) လုံး ရှုံးပွဲမရှိတဲ့လူပဲ။ ကျွန်တော်လည်း (၂၇) ပွဲလုံး နိုင်ပွဲဆက်ခဲ့တဲ့ကောင်ပဲလေ။ ကျားနဲ့ဆင် လယ်ပြင်မှာ တွေ့ ကြတာပေါ့။ တောထဲမှာ ကေသရာဇာခြင်္သေ့မင်းက တစ်ကောင်ပဲ အောင်းရမှာ။ ကျွန်တော်သာ ဘုရင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က Conor McGregor ကို လှဲသိပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကောင်လေ” လို့ UFC ရဲ့ လိုက်ဝိတ်ချန်ပီယံ Khabib Nurmagomedov က ကြွေးကြော်ခဲ့တာပါ။
“ဟာ . . . ကျွန်တော်ကတော့ ထိုးမှာပဲ။ Khabib ကတော့ ဘယ်လိုနေတုန်းမသိဘူး။ ကျွန်တော့်ဘက်ကတော့ သေချာနေပါပြီ။ ကျွန်တော်က သူဌေးလေ သိတယ်မလား။ ကျွန်တော့်ကို စိန်ခေါ်ချင်ရင် ကျွန်တော့်စည်းမျဉ်းနဲ့ လာထိုးပေါ့။ ဘောက်ဆင်ကြိုးဝိုင်းမှာပဲ တွေ့ ကြမယ်။ ကျွန်တော်က စင်ပေါ်ကလူပဲ။ ကျွန်တော့်နယ်ကို လာခဲ့လေ။ ဟာ . . ထိုးကြေးလား။ ဂဏန်းကိုးလုံးရရင် ထိုးရမှာပေါ့။ ဒေါ်လာသန်းရာကျော်ရရင် ပြန်ထိုးမှာလေ။ Khabib ကတော့ ကျွန်တော့် အကြွင်းအကျန်တွေကို ခံစားရမှာပေါ့”လို့ Floyd Mayweather က ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာနဲ့ ပြောလိုက်တာပါ။
UFC (Ultimate Fighting Championship) ရဲ့ ဥက္ကဌကြီး Dana White ဟာ Floyd Mayweather အနေနဲ့ Khabib Nurmagomedov နဲ့ ထိုးမယ်ဆိုရင် သိုင်းပေါင်းစုံစည်းကမ်း (MMA Rules) တိုင်းထိုးရမယ်၊ သံဇကာဝိုင်းထဲမှာပဲ လာထိုးရမယ်လို့ တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ “Floyd Mayweather က Khabib Nurmagomedov နဲ့ ထိုးချင်တာမလား။ UFC မှာ လာထိုးလေ။ ဘောက်ဆင်ကြိုးဝိုင်းမှာတော့ မထိုးခိုင်းတော့ဘူး။ သူဟာ Conor McGregor နဲ့တုန်းက ဘောက်ဆင်မှာ တစ်ခါထိုးပြီးပြီ။ ဒီတစ်ခါ ထိုးချင်ရင်တော့ သံဇကာဝိုင်းထဲမှာပဲ လာခဲ့ပေတော့။ တကယ့်တိုက်ပွဲဆိုတာ သေသေချာချာသိသွားလိမ့်မယ်” လို့ UFC ရဲ့ ဥက္ကဌကြီး Dana White က ဆိုသွားပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ UFC ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ Mayweather Vs Khabib လက်ဝှေ့ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Floyd Mayweather နဲ့ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးနေကြပါပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဘောက်ဆင်ကဝေကြီး Floyd Mayweather ဟာ Khabib Nurmagomedov အနေနဲ့ သူ့ကို ထိုးချင်ရင် ဘောက်ဆင်ကြိုးဝိုင်းထဲမှာပဲ ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောလိုက်တာပါ။
“UFC ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ကျွန်တော်နဲ့ လာညှိကြတယ်။ သံဇကာဝိုင်းထဲမှာပဲ ထိုးဖို့ပေါ့။ ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်လေ။ စိန်ခေါ်သူက Khabib Nurmagomedov လေ။ ကျွန်တော်မှမဟုတ်တာ။ သံဇကာဝိုင်းထဲမှာ သန်းရာချီအထိ ထိုးကြေးရဖူးလားလို့ ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။ မရဖူးပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကို ထိုးချင်ရင် ဘောက်ဆင်ကြိုးဝိုင်းမှာပဲ ရင်ဆိုင်ပေါ့” လို့ Floyd Mayweather က ပြန်ပြောခဲ့တာပါ။ သန်းရာချီကြွယ်ဝတဲ့ Floyd Mayweather ဟာ လက်ဝှေ့လောကမှ အနားယူထားတယ်ဆိုပေမယ့် ကျေနပ်လောက်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏမျိုးရမယ်ဆိုရင် ဘောက်ဆင်ကြိုးဝိုင်းထဲကို ပြန်ဝင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
“သနျးရာခြီရမယျ့ ဘောကျဆငျကွိုးဝိုငျးမှာပဲ ရငျဆိုငျပါ Khabib” လို့ဆိုတဲ့ Mayweather
UFC ရဲ့ လိုကျဝိတျခနျြပီယံ Khabib Nurmagomedov ဟာ ဝိတျတနျး (၅) ခုရဲ့ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ Floyd Mayweather ကို စိနျချေါလိုကျတဲ့သတငျးကို အားလုံးသိကွမယျထငျပါတယျ။ “ခငျဗြားကလညျး ပှဲ (၅ဝ) လုံး ရှုံးပှဲမရှိတဲ့လူပဲ။ ကြှနျတျောလညျး (၂၇) ပှဲလုံး နိုငျပှဲဆကျခဲ့တဲ့ကောငျပဲလေ။ ကြားနဲ့ဆငျ လယျပွငျမှာ တှေ့ ကွတာပေါ့။ တောထဲမှာ ကသေရာဇာခွင်ျသမေ့ငျးက တဈကောငျပဲ အောငျးရမှာ။ ကြှနျတျောသာ ဘုရငျပါ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောက Conor McGregor ကို လှဲသိပျနိုငျခဲ့တဲ့ ကောငျလေ” လို့ UFC ရဲ့ လိုကျဝိတျခနျြပီယံ Khabib Nurmagomedov က ကွှေးကွျောခဲ့တာပါ။
“ဟာ . . . ကြှနျတျောကတော့ ထိုးမှာပဲ။ Khabib ကတော့ ဘယျလိုနတေုနျးမသိဘူး။ ကြှနျတေျာ့ဘကျကတော့ သခြောနပေါပွီ။ ကြှနျတျောက သူဌေးလေ သိတယျမလား။ ကြှနျတေျာ့ကို စိနျချေါခငျြရငျ ကြှနျတေျာ့စညျးမဉျြးနဲ့ လာထိုးပေါ့။ ဘောကျဆငျကွိုးဝိုငျးမှာပဲ တှေ့ ကွမယျ။ ကြှနျတျောက စငျပျေါကလူပဲ။ ကြှနျတေျာ့နယျကို လာခဲ့လေ။ ဟာ . . ထိုးကွေးလား။ ဂဏနျးကိုးလုံးရရငျ ထိုးရမှာပေါ့။ ဒျေါလာသနျးရာကြျောရရငျ ပွနျထိုးမှာလေ။ Khabib ကတော့ ကြှနျတေျာ့ အကွှငျးအကနျြတှကေို ခံစားရမှာပေါ့”လို့ Floyd Mayweather က ဂုဏျယူဝံ့ကွှားစှာနဲ့ ပွောလိုကျတာပါ။
UFC (Ultimate Fighting Championship) ရဲ့ ဥက်ကဌကွီး Dana White ဟာ Floyd Mayweather အနနေဲ့ Khabib Nurmagomedov နဲ့ ထိုးမယျဆိုရငျ သိုငျးပေါငျးစုံစညျးကမျး (MMA Rules) တိုငျးထိုးရမယျ၊ သံဇကာဝိုငျးထဲမှာပဲ လာထိုးရမယျလို့ တောငျးဆိုလိုကျတာပါ။ “Floyd Mayweather က Khabib Nurmagomedov နဲ့ ထိုးခငျြတာမလား။ UFC မှာ လာထိုးလေ။ ဘောကျဆငျကွိုးဝိုငျးမှာတော့ မထိုးခိုငျးတော့ဘူး။ သူဟာ Conor McGregor နဲ့တုနျးက ဘောကျဆငျမှာ တဈခါထိုးပွီးပွီ။ ဒီတဈခါ ထိုးခငျြရငျတော့ သံဇကာဝိုငျးထဲမှာပဲ လာခဲ့ပတေော့။ တကယျ့တိုကျပှဲဆိုတာ သသေခြောခြာသိသှားလိမျ့မယျ” လို့ UFC ရဲ့ ဥက်ကဌကွီး Dana White က ဆိုသှားပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာတော့ UFC ရဲ့ တာဝနျရှိသူတှဟော Mayweather Vs Khabib လကျဝှပှေဲ့နဲ့ ပတျသကျပွီး Floyd Mayweather နဲ့ အသေးစိတျဆှေးနှေးနကွေပါပွီ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ဘောကျဆငျကဝကွေီး Floyd Mayweather ဟာ Khabib Nurmagomedov အနနေဲ့ သူ့ကို ထိုးခငျြရငျ ဘောကျဆငျကွိုးဝိုငျးထဲမှာပဲ ရငျဆိုငျရမယျလို့ ခပျပွတျပွတျပွောလိုကျတာပါ။
“UFC ရဲ့ တာဝနျရှိသူတှေ ကြှနျတျောနဲ့ လာညှိကွတယျ။ သံဇကာဝိုငျးထဲမှာပဲ ထိုးဖို့ပေါ့။ ကြှနျတျောပွနျပွောလိုကျတယျလေ။ စိနျချေါသူက Khabib Nurmagomedov လေ။ ကြှနျတျောမှမဟုတျတာ။ သံဇကာဝိုငျးထဲမှာ သနျးရာခြီအထိ ထိုးကွေးရဖူးလားလို့ ကြှနျတျောမေးလိုကျတယျ။ မရဖူးပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့ကို ထိုးခငျြရငျ ဘောကျဆငျကွိုးဝိုငျးမှာပဲ ရငျဆိုငျပေါ့” လို့ Floyd Mayweather က ပွနျပွောခဲ့တာပါ။ သနျးရာခြီကွှယျဝတဲ့ Floyd Mayweather ဟာ လကျဝှလေ့ောကမှ အနားယူထားတယျဆိုပမေယျ့ ကနြေပျလောကျတဲ့ ငှကွေေးပမာဏမြိုးရမယျဆိုရငျ ဘောကျဆငျကွိုးဝိုငျးထဲကို ပွနျဝငျဖှယျရှိပါတယျ။